Making WordPress BLog | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← How Do You Think on Your Work??
Different Stories in Different Villages →
November 7, 2007 · 10:23 am
Making WordPress BLog
မသိနိုးနားနဲ့ WordPress မှာ တိုက်ရိုက် ဘလော့ဂ်တစ်ခုလုပ်ပြီးမှ စပ်မိစပ်ရာမှာ ကိုသင်္ကြန်ကျေးဇူးပြုထားတဲ့ WordPress လုပ်နည်းအရ အသစ်ထပ်လုပ်လိုက်တာ တော်တော်လေးလန်ထွက်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။
ကိုသင်္ကြန်က http://freehostia.com နဲ့ www.byethost.com ကို အကြံပေးထားပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ http://phpnet.us/ နဲ့ အကောင့်ဖွင့်မိရက်သားဖြစ်တာနဲ့ ပီအိပ်ခ်ျပီနဲ့ပဲ ဆက်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်ဝေမျှချင်တာက ကျနော်လို ယောင်ခြောက်ဆယ်ဟိုလုပ်ဒီလုပ် အချိန်မကုန်ရအောင် အတွေ့အကြုံကို ပြောချင်၊ အခက်အခဲလေးတွေရှောင်လွှဲ(သို့) ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အကြံပေးချင်တာပါ။
ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရမယ့်နည်းတွေကတော့ စပ်မိစပ်ရာမှာ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်နဲ့ ယူပါ။ လုပ်ပါ။
ကျနော်က http://phpnet.us/ နဲ့ လုပ်ရာမှာ တွေ့ကြုံရတာလေးတွေလည်း ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာပါ။
ဘလော့ဂ်ဆရာ၊ မာစတာများက ကကြီးကစပြီးပြောလေ့မရှိပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကျနော်တို့လို မနေ့တနေ့ကမှ စလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် လိပ်ပတ်မလည်ဖြစ်တတ်လို့ ကကြီးကစကောက်ပြီး ကျနော်ပြောပရစေ။
WordPress လုပ်ရာမှာ www.wordpress.com ကို ၀င်ပြီး တိုက်ရိုက် ဘလော့ဂ်လုပ်တာရယ်၊ အစမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အခမဲ့အထိုင် (Free Host) တစ်ခုခုကနေ လုပ်တာရယ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပြင်ချင်တိုင်းပြင်လို့ရအောင်၊ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်လို့ ကလိလို့ရအောင် အခမဲ့အထိုင် (Free Host) ကနေ လုပ်ကြရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျနော်ဆို နှစ်ခါလောက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ ခက်တယ်၊ ရှုပ်တယ်ထင်ရပေမယ့် ကျနော် လင့်ခ်ထားတဲ့ IT & Blogging ကိုဖြစ်ဖြစ် ဖိုရမ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ် သွားမေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုမင်းကျော်၊ ကိုသင်္ကြန်၊ ညီလင်းဆက်၊ မှော်ဆရာ စသူတို့က ကူညီဖို့ အသင့်ပါ။
ကျနော်ကတော့ http://phpnet.us/ နဲ့ လုပ်ပါတယ်။
၁။ http://phpnet.us/ မှာ Sign Up
၂။ ပြီးရင် e-mail မှာ သူတို့ပေးလာမယ့် Cpanel အမည်၊ လျှို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ်တွေ သွားကြည့်။
၃။ e-mail ထဲက Cpanel လင့်ခ်ကို ဖွင့်။
၄။ အသေးစိတ် ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာ ပုံနဲ့တကွ ကိုသင်္ကြန်ရဲ့ ဖိုင်အတိုင်းကြည့်ပါ။
၅။ Database လုပ်ပြီးတဲ့ အခါ Database Name, MySQL Host Name တွေ မှတ်ထားဖို့ ကိုသင်္ကြန်က ပြောထားပါတယ်။ http://phpnet.us/ မှာ ပြဿနာက Database Name ပဲတွေ့ပြီး MySQL Host Name မတွေ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီလို ဖြစ်နေရင် Database Name ရဲ့ အောက်နားက Admin ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ အပေါ်ဆုံးနားက Sever ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ sql(ကိန်းဂဏန်း).(phpnet.us) ဆိုတာလေးပါ။ ကျန်တာတွေ ကိုသင်္ကြန်ပြောသလို ဆက်နိုင်ပါပြီ။ အဲတာကို သွားပြီးမှတ်မထားရင် ရှေ့ဆက်လို့မရပါ။
၆။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက Themes ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပါ။ အီးမေးလ်လင့်ခ်ကဖွင့်လိုက်တဲ့ cpanel.phpnet.us ကို ပြန်သွား၊ File Manager ကိုဖွင့်၊ အဲဒီမှာ ကိုယူထားတဲ့အမည် (ဥပမာ mmthinker.iblogger.org) ကို တွေ့မယ်။ ကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ အထဲမှာ htdos ပြီးရင် wp-content ပြီးရင် Theme ။ ဒါမှမဟုတ် Directory Tree မှာ ကွက်လပ်ဘေးနားက ပုံလေးကို ကလစ်ပါ။ ပထမဆုံး ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ URL ကို Double ကလစ် (ဥပမာ mmthinker.iblogger.org)၊ ခဏလေးစောင့်၊ ပြီးရင် htdos ကို Double ကလစ်၊ ခဏစောင့်၊ ပြီးရင် wp-content ကို Double ကလစ်၊ ပြီးရင် Themes ကို Double ကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အပေါ်မှာ Choose ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံး Upload ပေါ့။ သိပြီးသားသူတွေ အတွက် ဘာမှမဆန်းပေမယ့် အသစ်ထိတွေ့သူတွေအဖို့ ဆင်ကြီး အမြီးကျမှတစ်ဆိုတာလို ဖြစ်တတ်လို့ ဖြည့်ပြောတာပါခင်ဗျာ။
၇။ http://www.wpthemesfree.com နဲ့ http://topwpthemes.com မှာ တန်းပလိတ်တွေရွေးဖို့ ကိုသင်္ကြန်က အကြံပေးပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ဟာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူပြီးရင် zip ဖိုင်ကို သွားမဖြည်ပါနဲ့။ တိုက်ရိုက် Browse လုပ်ချလိုက်ပါ။ WordPress ရဲ့ Presentation ထဲ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
၈။ နောက်တစ်ခု ဝေမျှချင်တဲ့ အတွေ့အကြုံက စီဗုံးပါ။ မြန်မာဘလော်ဂါအများစုဟာ Blogspot မှာ မွှေပြီးမှ WordPress ကိုရောက်လာကြတာပါ။ (မြန်မာပြည်မှာ ဘလော့ဂ်စပေါ့ကို ပိတ်လိုက်လို့လေ)။ ကျနော်ကတော့ ဘလော့ဂ်စပေါ့က စီဗုံးကုဒ်တွေယူလာ၊ WordPress ရဲ့ Presentation à Widgets ကိုသွား၊ အပိုယူလို့ရတဲ့ Text မှာ ထည့်။ အရင် စီဗုံးအဟောင်းက အတိုင်း ရသွားပါတယ်။ ဆိုက်ကလေးပဲ ဘောင်ဝင်အောင် နည်းနည်းပြင်လိုက်ရပါတယ်။
၉။ Hit Counter ကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပါ။ http://www.ultimate-counter.com/ မှာ အသစ်ယူပြီးဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပါ။
၁၀။ နိုင်ငံအလိုက်လာလည်သူအရေအတွက်ကို ကြည့်နိုင်တဲ့ NeoCounter လည်း အဟောင်းကို ဒီနည်းနဲ့ပဲ ကူးထည့်နိုင်ပါတယ်။
၁၁။ WordPress မှာ Read More အတွက် သတ်သတ်လုပ်စရာ မလိုဘူးဗျို့။ Split post with more tag (Alt+t) ဆိုပြီးပါပြီးသား။ ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာ ကာဆာချပြီး အဲဒါကို ကလစ်လိုက်၊ ရရော။
၁၂။ WordPress မှာ တိုက်ရိုက်လုပ်တုံးက ဖောင့်အရောင်ပြောင်းလို့ရပေမယ့် Free Host ကနေလုပ်တော့ မရပြန်ဘူး။ (တခြားသူတွေတော့ မသိဘူး။) ပြဿနာမရှိဘူး။ Microsoft Word ထဲမှာ စိတ်ကြိုက်ကစားပြီး ပြန်ကူးထည့်၊ အိုကေတယ်။ စာပိုဒ်ကို Justify လုပ်ဖို့၊ ဇော်ဂျီနဲ့ သေချာပေါက်ကောင်းကောင်းပေါ်ဖို့၊ Microsoft Word ထဲမှာချ ကစားပြီး ပြောင်းထည့်နည်းနဲ့ပဲ ကျနော်လုပ်ပါတယ်။
အခု ထပ်ထည့်ပြောတာလေးတွေက ကိုသင်္ကြန်ပြောတဲ့ အတိုင်းကို http://phpnet.us/ မှာ လုပ်သွားတဲ့ အကြောင်းပါ။ စလုပ်သူတွေအတွက် နည်းနည်းနှမ်းဖြူးလိုက်တာပေါ့။
Filed under IT & Blogging, Wordpress
Tagged as Blogging, Wordpress
0 responses to “Making WordPress BLog”
November 10, 2007 at 7:46 am
ကျေးဇူး အထူး..။ ကလိ လိုက်ဦးမယ်…။
ရတော့ရသွားပြီ… ဒါပေမယ့်…font size က အဆင်မပြေဘူး…။ Ie မှာ တော်တော် အရုပ်ဆိုးနေတယ်…။ ဘယ်လောက်ပြင်ပြင် မပြောင်းဘူး…။ ကူညီပါဦး..။ ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှတစ်နေတယ်…။ ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနေပြီ…။
Super XXX Porno Best Porno! Free Sex! Download exclusive porno
Best Porno Site | Join Porno Site | DVD Porno Movie | Teen Porn | Big Titties | All Best Porno
All Movie Free Funny Video Top 100 Video Shocking Video Online Video Movie OnlineStar Video
Amateur Anal Asian BBW BDSM BigTits Black FootFetish Gay Group Hairy Hardcore Lesbians Mature TeensHardcore
Celebrity Movie Video: